1. Yiri ihe nkpuchi n'oge oge oké ọrịa, n'oge anwụrụ na uzuzu, mgbe ị na-arịa ọrịa ma ọ bụ gaa ụlọ ọgwụ maka ọgwụgwọ. N'oge oyi, ndị agadi na-enweghị ọgwụ ọria, ndị ahụ na-arịa ọrịa na-aka eyi nke ọma mgbe ha na-apụ.
2. Ọtụtụ n'ime ihe ndị mara mma bụ nke a na-eji akwa eriri kemịkalụ, yana ikuku na-adịghị mma na mkpali kemịkalụ, nke dị mfe imerụ akụkụ okuku ume. Ejiri masks ndị ruru eru jiri akwa akwa na akwa a na-abụghị nke a kpara akpa.
3. Ọ bụ enweghị isi na nkà mmụta sayensị abụghị itinye ya gburugburu mgbe ịsachara ya ma hichaa ya n'oge. Mgbe ịkpụchara nkpuchi ruo awa 4-6, ọtụtụ nje ga-agbakọ na ọ ga-asa ihe nkpuchi ahụ kwa ụbọchị.
4. Ejikwala ihe nkpuchi ọ bụla iji gbaa ọsọ, n'ihi na mmega ahụ ikuku n'èzí chọrọ ka ukwuu karịa ka ọ dị na mbụ, ihe nkpuchi ahụ nwere ike ibute iku ume na enweghị oxygen na viscera, wee mepụta nsonaazụ dị oke njọ.
5. Mgbe ịkachasịrị nkpuchi ahụ, ọnụ, imi na ọtụtụ mpaghara dị n'okpuru orbit ahụ kwesịrị ikpuchi. Ntuchi nke nkpuchi ahụ kwesịrị ịdị nso na ihu, mana ọ gaghị emetụta akara nke anya.